Benny kaThixo Retreat Luxury Bushland Escape
Emu Flat, South Australia, Australia
IBenny's Retreat yipropathi ekumgangatho okhethekileyo, ibekwe kwindawo engqonge amatyholo endalo ethe cwaka kwaye enomtsalane, iiKangaroos kunye namaxhama asendle ziindwendwe eziqhelekileyo, intaka ininzi.
Ukuhamba nje ngemizuzu eli-10 (okanye iteksi) ukuya kwiindawo zokutyela ezintle kunye neecafe kwisitrato esikhulu saseClare.
Ulonwabo lukhutshelwa kuluhlu lweencwadi, iimagazini kunye nemidlalo yebhodi. I-WiFi engenamkhawulo kunye nesithethi seBose yebluetooth engenazingcingo, umlilo weenkuni kunye nezibonelelo ezininzi zesidlo sakusasa ziqinisekisa ukuba ukuhlala kwakho akunakulibaleka.
I-Benny's Retreat lithuba lokuba uphumle, indlu kunye nepropathi yeyakho ukuba uyonwabele ngexesha lokuhlala kwakho.
Iiyure ezingama-48 ukusuka ekufikeni umkhombandlela weendwendwe zendlu uya kuthunyelwa nge-imeyile ngalo lonke ulwazi oya kulufuna ngokuhlala kwakho kubandakanya idilesi, izalathiso kunye nekhowudi ekhuselekileyo engundoqo.
Iiyure ezingama-48 ukusuka ekufikeni umkhombandlela weendw…